Samarekha.com.np :: राष्ट्रियता र नागरिकतामा समान हकको सवाल |
राष्ट्रियता र नागरिकतामा समान हकको सवाल
|| 1751 Views || Published Date : 4th July 2019 |
(आमाको नामबाट नागरिकताको सवाल नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो । दुवै संविधानसभाभित्र र संविधानसभाबाहिर यसमा निकै बहस भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणालगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावले आमाको नामबाट नागरिकताको विषय संस्थागत भएको थियो । नागरिकतामा महिलाको समान हकको विषय संविधानमा नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकताको विषय संविधानले प्रष्ट रुपमा संबोधन गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको एक वर्ष बढी भएको छ भने राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको नौ महिना वितिसकेको छ तर समितिले अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । आमाको नामबाट नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियता गुम्ने विषयसँग जोडन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा आमाको नामबाट नागरिकताको विषय राष्ट्रियता बिरोधी कुरा किन भनिँदैछ ? संघीय संसदबाट पारित हुनुपर्ने यो विधेयक किन अहिले सम्म आउन सकेन ? समानताबिरोधी प्रावधान रोक्न के गर्नेलगायतका प्रश्न हामी प्रदेश नम्बर पाँचका सांसदहरुलाई सोधेका थियौं । समरेखा बहसको यो अंकमा प्रस्तुत छ प्रदेश नम्बर पाँचका उपसभामुख कृष्णी थारु, संसदीय मामला तथा कानुन समिति संयोजक दामा शर्मा, सांसद सरस्वती गौतम र थान कुमारी थापाको विचार । सम्पादक)
नागरिकता विधेयक छिटो पारित हुनुपर्छ
उपसभामुख, प्रदेश नम्बर पाँच
संघीय संसदमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगो लगाउनु पर्छ । धेरै लम्बाउनु हुँदैन । सबैका भावना र आवश्यकता बुझेर विधेयक ल्याउनु पर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था भयो तर कानुन बनाउँदा समस्या देखिएजस्तो लाग्छ । नागरिकताका सम्बन्धमा आमालाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । बाबु खोज्नै पर्ने कोणबाट बढी कुरा हुन थालेको छ । यसो हुनु पितृसत्तात्मक सोंचको उपज हुन सक्छ । नागरिकतामा अझै पनि समान हक छैन । विभेद छ । जुन राम्रो होइन ।
आमाको नामबाट नागरिकताको विषय राष्ट्रियताबिरोधी विषयको रुपमा चर्चा हुनु दुःखको कुरा हो । आमा पनि नेपाली नागरिक हो । यो देशका हरेक नेपाली नागरिकले पाउने सबै हकमा हरेक आमाको पनि पूर्ण हक छ । यो कुरा सबैले आत्मसात गर्नु पर्छ । कहीँ पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता बिरोधी काम हुने जसरी कुरा उठ्नु हुँदैन । संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था आयो तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेला बहस पछि फर्किन खोज्नु राम्रो होइन । व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक चिन्तन हावी देखिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भैसकेपछि संविधान अनुरुप छिटो कानुन बन्नुपर्छ । शंकाको कुरा आउनु हुँदैन । आफ्ना सन्तानलाई पहिचान दिने कुरामा आमाले पूर्ण अधिकार पाउनु पर्छ र दिनु पनि पर्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता धरापमा पर्छ भन्नु गलत
संसदीय मामला तथा कानुन समिति संयोजक
आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि महिलाहरुले संघर्ष गरिरहेको विषय हो । नौ महिना कोखमा राखेर जन्माउने हुर्काउने दायित्व आमाले बढी लिनुपर्ने तर पहिचान दिनेबेला बाबुको खोजी हुने संस्कार सही होइन । सन्तानलाई जन्माउँदा हुर्काउँदा महिलाहरु आफ्नो बृत्ति विकास र अन्य थुप्रै सामाजिक कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने तर सन्तान टुकु हिँड्ने भएदेखि कसको भन्दा बाबुको सन्तानबाट चिनिने संस्कार बदलिनु पर्छ । समान रुपमा आमाबाट पनि सन्तानको पहिचान जोडिने वातावरण बन्नु पर्छ ।
२०६३ मा हामीहरु अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पुगेसँगै कुरा उठाएपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम उल्लेख गर्ने महल राख्ने व्यवस्था शुरु भएको थियो । त्यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम लेख्ने ठाउँसम्म राखिएको थिएन । हामीले देखेका छौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बुवाको नागरिकता लिएर गयो भने आमा को हो खोजिँदैन । अझ कतिपय नागरिकता दिने कार्यालयमा त आज पनि नागरिकतामा आमाको नाम लेख्ने ठाउँ हुँदाहुँदै त्यसमा ड्यास या इन्टु हानिदिने चलन समेत गएको छैन । यो बिडम्बनाबाट मुक्त हुन पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा व्यापक बहस भएको छ । जसरी बाबुको नागरिकता लिएर जिल्ला प्रशासन जाँदा सहजै नागरिकता पाउन सकिन्छ त्यसरी नै आमाको नागरिकता लिएर जाने सन्तानले पनि सहजै नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा निकै जोडदार रुपमा उठायौं । संविधान लेखिँदै गर्दा समानता हो भने बाबु खोज्नै पर्छ भन्ने कुरा आयो । ्आमा कोहो खोज्नुपर्ने बाध्यता नहुने तर बाबु खोज्नै पर्ने भन्ने पक्ष शक्तिशाली हुँदा धेरै पहिले संसदमा पुगेको नागरिकता विधेयक अझै पारित भएर आउन सकेको छैन ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा बाबुकोबाट लिनु हुँदैन भन्ने विषय होइन । यो विषय त बाले छाडेर हिँडेको छ, आमासँग आश्रित सन्तान छन् भने सन्तानको नागरिकता दिन अर्को लिएर हिँडेको या अपराधी बाबु खोज्दै जानु नपरोस् र सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकुन् भन्ने हो । यही विशेष अवस्था संबोधन गर्न संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था छ तर यो विषयलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासँग मिसाएर गिजोल्ने गरिएको छ । नेपाली पुरुषले विदेशी स्वदेशी जोसँग विहे गरोस् बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिँदा आमा खोज्न परेन तर नेपाली आमाले मेरो सन्तान भनेर जाँदा बाबु को थियो भनेर खोजी गर्ने गरिएको छ । विदेशी विहे गरेका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा विदेशी बढी हुन सक्छन् भन्ने आशंका गरिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा भोलि आयातीत मान्छे बढी हुन्छन् भन्ने अनुमानका भरमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित हुन पुगेको छ । यो तर्क सोह्रै आना गलत छ । त्यसैमा बहस अल्झिएर नागरिकता विधेयक संसदमा अडकिएको छ ।
राष्ट्रियता जोगाउने नाममा गरिएको यो तर्क सही छैन । त्यसरी मान्छे नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ । आमालाई विभेद गर्नलाई अनावश्यक बहस गरिएको छ । जहाँ बाबु आमा दुवै छन्, परिवारमा समस्या छैन त्यहाँ आमा बाबु दुवैको नाम लेखेर नागरिकता दिने गरिएको छ तर यो बहस भनेको जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यसलाई संबोधन गर्ने खोजेको हो । विभिन्न कारणले एकल हुनपुगेका आमासँग आश्रित थुप्रै वच्चा छन् । ती बच्चाको नागरिकता बनाउँदा विना प्रश्न आमाको नागरिकताको आधारमा दिइनु पर्छ । संविधानको मर्म अनुरुप कानुन बन्नु पर्छ । हामीले जति समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाए पनि संविधानले रोकेको भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला पुरुषको समान हकको कुरा हो । वैवाहिक अंगीकृतमा पनि समान हक हुनुपर्छ बरु नेपाली नागरिक महिला पुरुष दुवैसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा केही रिजर्भसेन राख्न सकिन्छ तर त्यो विहे गरेर आउने विदेशी महिला र पुरुष दुवैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । समानताको हकका संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा छोरा र छोरीले गर्ने विहेका सन्दर्भलाई फरक फरक रुपमा व्यवहार गर्नु फेरी पनि विभेदलाई निरन्तरता दिनु नै हो । त्यो बाहेक विना अवरोध आमाको नामबाट नागरिकता दिनकालागि संविधानले रोकेको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुरुप कानुन बन्नुपर्नेमा ढिलाई हुनु दुःखद कुरा हो ।
नागरिकतामा देखिएको विभेदले समानताको हक कुण्ठित भएको छ
संसदीय मामला तथा कानुन समिति
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुनुका पछाडि आमा वा बाबुको सवालमा अडकिनु भन्दा पनि अंगीकृत नागरिकता र बंशजको नागरिकताको बहसका कारणले अडकिएको जस्तो लाग्छ । आमाको नामबाट नागरिकताको सवाल त महिलाहरुले शुरुदेखि नै उठाइरहेको सवाल हो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा यो आवाज झन बेसी उठायौं । आमाको संरक्षणमा हुर्केका धेरै सन्तान छन् । नेपाली आमाका सन्तान अनागरिक हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा नै आन्दोलनको स्प्रीट थियो । आन्दोलन चलिरहँदा नेताहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने सवाल हल हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । यसले पनि आन्दोलनमा धेरै महिलाको सहभागी रह्यो ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । यो माग गरिरहँदा कस्तो भयो भने कहाँनेर ग्याप भयो भने हामीले खोजेको आमाको नामबाट नागरिकता हो तर संविधानमा बाबु पहिले भएर आयो । बाबु हुनैपर्ने जस्तो अवस्था ल्याउन खोजियो । हाम्रो मान्यता एकल आमाको संरक्षणमा रहेका सन्तानले बाबुको खोजीबिना आमाको नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर त्यसरी आमाको नाममा पाउन सकिने कानुन आउन सकेको छैन । संसदमै अडकिएको छ । नागरिकतामा देखिएको विभेदले अहिले पनि समानताको हक कुण्ठित गरेको छ ।
अहिले प्रदेशको कानुन समितिमा रहेर काम गर्दा मैले तितो अनुभव गरेकी छु । हिँजो हामीसँग आन्दोलनमा सँगसँगै समानताको नारा लगाउने पुरुष साथीहरु कानुन बनाउँदा महिलाको विषय आउने बित्तिकै नसोंचेको कुराहरु उठाएको देख्दा अचम्म लाग्छ । पुरुष मानसिकताबाट बहस भैरहँदा महिलाप्रतिको संवेदनशीलता ओझेलमा पारिँदो रहेछ । महिलाको मत कम हुँदा बहुमतबाट पारित हुँदा
एउटा छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सजिलै नागरिकता बन्छ तर एउटा छोरीले विदेशी ज्वाईं ल्याउँदा नागरिकता बन्दैन । यसमा प्रष्ट रुपमा लैंगिक विभेद छ । कि त त्यो बुहारीसँग पनि तर्सिनु पर्यो अन्यथा ज्वाईंसँग किन तर्सिने ? यो हाम्रो भनाई हो । यो कुरा राष्ट्रियता बिरोधी होइन राष्ट्रियताको पक्षमा छ । संविधानले दिएको समानताको हकबिरुद्ध अनावश्यक बहस उचालिएको छ । आफ्ना देशका नागरिकलाई पहिचान दिएर राष्ट्रियता जोगिँदैन । सीमानाका समस्या हल गर्न अरु विधि अपनाउन सकिन्छ तर यसैको बहानामा आमाको नामबाट सहजै सन्तानले नागरिकता पाउने कानुन ल्याउन पछि हट्न पाईंदैन । संविधान विरुद्ध जान कसैलाई छुट छैन । संविधानको अपव्याख्या गर्न पाईंदैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ । सवै सचेत नागरिक लाग्नु पर्छ ।
पुरुष चिन्तन हावी हुँदा समस्या
आमाको नामबाट नागरिकता विषय लामो समयदेखि हामीले उठाइरहेको विषय हो । आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यहाँ आमा वा वाबु अथवा आमा र बाबु भन्ने विषयमा धेरै कुरा उठ्यो आन्दोलन पनि भए । तर अहिले संविधानले दिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा अप्ठेरो महशुस भएको छ । सीमाना र अंगीकृतको कुरा ल्याएर आमा वा बाबुको अल्झाउने गरिएको छ । हिँजो द्वन्द्वमा परेर या अन्य कुनै कारणबाट बाबुविहिन हुनुपरेका बालबालिकाहरुकालागि अप्ठेरो भैरहेको छ ।
दोधारे कुराले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेर कानुन आउन सकिरहेको छैन । पुरुष चिन्तनले असर पारेको छ । यो विषय महिलाले मात्र उठाउने विषय जस्तो भएको छ । कतिपय महिलाहरुमा पनि अस्पष्टता छ । अलमल छ । जुन संस्कार संस्कृतिमा हामी हुर्कियौं त्यसले पनि आमाको हकमा अलमल बनाएको छ । जुन महिलाले बुझ्नु भएको छ उहाँले प्रष्ट रुपमा आमाको नामबाट नागरिकताको विषय बलियोसँग उठाइराख्नुभएको पनि छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई धेरै भाञ्जाभाञ्जी भित्रिने भन्दै विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । जुन दुःखद कुरा हो ।
हिँजो आन्दोलनको राप र ताप बलियो थियो आमाको नामबाट नागरिकताको पक्षमा सबै सहमत देखिए तर अहिले आएर अलमल पार्न खोजिएको छ । राष्ट्रियतासँग जोडेर आमाको नाममा नागरिकताको आवाज उठाउनेहरुलाई लाञ्छित गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्ता महिलालाई पनि उत्तिकै छ । आमाको नाममा नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा आँच आउने होइन । मलाई त्यसो लाग्दैन ।
सरकार संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारिताकासाथ जानु पर्छ । संविधानमा टेकेर कार्यान्वयनमा गयौं भने यी विषयहरु हल हुन्छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाको पक्षधर संघीय संसदमा हुनुभएका सांसदहरु तथा हामीहरु सबैले यो आवाज उठाइराख्नु पर्छ ।